Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Tokko
Fankishinoota Xiinannoo Kutaa Tokko
pirobaabilitii eddattoo faca'iinsa baynoomiyaalii wajjinii kenna.
Yaaliiwwan lakkoofsa yaaliwwan adda addaati.
SP tokko tokkoon yaalii irratti pirobaabilitiilitii argachuuti.
T1 lakkoofsa yaaliiwwaniitif daangaa gadaanaa qindeessa.
T1 lakkoofsa yaaliiwwaniitif daangaa gubbaa qindeessa.
pirobaabilitiin saddeeqa darbiinsa kudhanii maali, kan jaha sirrumaan yeroo lama mul'atu? pirobaabilitiin jahaa (ykn lakkoofsa biraa kamiiyyuu) 1/6 dha.Formuulaan armaan gadii haalota kana walitti qaba:
=B(10;1/6;2) pirobaabilitii 29% kenna.
Fankishinii rukkina pirobaabilitii dimshaashaa kenna.
Lakkofsi gatii gidduu Jalqaba fi Xumura iddoo fankishiniin itti madaalamu.
Alfaan ulaagaa raabsiiti.
Bettaan ulaagaa raabsiiti.
Jalqaba(dirqaala) daangaa gadii Lakkoofsa ti.
Xumuraa (dirqaala) daangaa gubbaa Lakkoofsa ti.
Walittiqaba (dirqalee) 0 ykn Soba rukina faankishinii carraa herreeguu danda'a. Gatii abbaa fe'ee ta'uu dand'a ykn Dhugaa ykn faankishinii tamsa'ina walitti qabaa herreeguuf keessaa hafa.
=BETADIST(0.75;3;4) gatii 0.96 kenna.
Garagaltoo fankishinii rukkina pirobaabilitii dimshaashaa kenna.
=BETAINV(0.5;5;10) gatii 0.33 kenna.
Jecha dhuunfaa pirobaabilitii raabsii baynoomiyaalii kenna.
BINOMDIST(X; Yaaliiwwan; SP; C)
Xn Tuuta yaaliiwwanii keessaa lakkoofsa moo'insaati.
C = 0 pirobaabilitii mudannoo takkaa shallaga fi C = 1 pirobaabilitii dimshaashaa shallaga.
=BINOMDIST(A1;12;0.5;0) agarsiisa (yoo gatiiwwan 0 hanga 12 A1 keessaatti galchaman) pirobaabilitiin meelchiiwwan faraankaa 12 kan mataawwan sirrumaan dhufuu danda'an lakkoofsa bay'isuu galchii A1 ta'a.
=BINOMDIST(A1;12;0.5;1)Tarreewwan walfakkaadhaf pirobaabilitiiwwan dimshaashaa agarsiisa. Fakkeenyaf, yoo A1 = 4 ta'e pirobaabilitiin dimshaashaa 0, 1, 2, 3 or 4 bay'isuu mataawwan (hin hammatamiin yookin).
Chaay iskuweerii eerame kan maldhawiinsi mirkanaa'e irraa gatii pirobaabilitii kenna. CHIDIST gatii chaay iskuweerii eddatto tasaatif kennamu kan ida'ama (gatii hubatame-gatii eeggame)^2/ gatii eeggame irraa gatiiwwan raabsii chaay iskuweerii tiyooritikaalii hundaaf shallaga fi kanarraa dogongora pirobaabilitii kan hedatiin yaalamuuf murteessa.
Pirobaabiliitin HIDIST dhan murtaa'e CHITEST dhanis ni murtaa'a.
Lakkofsi gatii chaay iskuweerii kan eddattoo tasaa pirobaabiliti dogongoraa murteessuuf fayyaduu dha.
DigriiBilisaan hammaa firidamii yaaliiti.
=CHIDIST(13.27; 5) walqixa 0.02 ta'a.
Yoo gatiin chaay iskuweerii kan eddattoon tasaa 13.27 ta'ee fi yaaliin digrii firiidamii 5 qabaate, sana booda hedatiin pirobaabiliitii dogongoraa 2% wajjin mirkaneeffama.
Garagaltoo pirobaabilitii eege tokkee kan raabsa chaay-iskuweerdii kenna.
Lakkoofsi gatii pirobaabilitii dogongoraati.
DigriiBilisaan hammaa bilisummaa yaaliiti.
Saddeqni yeroo 1020 darbatame. Lakkoofsootni 1 hanga 6 saddeqa irraa si'a 195, 151, 148, 189, 183, fi 154 (gatiiwwan hubannoo) ol dhufa. Hedaatin saddeeqni dhaabbataa mitii ni yaalama.
Raabsi chaay iskuweerii kan eddattoo tasaa foormulaa armaan oliitti kennameen murtaawa. Gatii eeggamaan lakkofsoota saddeeqa irratti kennamee n bay'isuu 1/6 waan ta'eef, kanaafuu 1020/6 = 170 ta'a, formulichi gatii chaay iskuuweerii 13.27 kenna.
Yoo chaay iskuuweeriin (hubatame) irraguddaa ykn walqixa CHIINV chaay iskuweerii (tiyoritikaalii) ta'e, maldhawiinsi ni gatama, garaarummaan tiyoorii fi yaalii bay'ee guuddaa waan ta'eefi dha. Yoo chaay iskuweeriin hubatame irra xiqqa CHIINV ta'e, maldhawiinsi ni dogongora pirobaabilitii eerame wajjin raggaasifama.
=CHIINV(0.05;5) 11.07 kenna.
=CHIINV(0.02;5) 13.39 kenna.
Yoo pirobaabilitiin dogongoraa 5% ta'e, saddeeqni dhugaa miti. Yoo pirobaabilitiin dogongoraa 2% ta'e, sababni dhabbataa ta'uu isaa amansiisu hin jiru.
Chaay-iskuweerii of danda'inaa irratti hundaa'uudhan piroobabiliitii diviyaansii kan tarreewwan yaalii lamaa raabsa tasaa irraa kenna. CHITEST returns the chi-squared distribution of the data.
Pirobaabiliitin CHIEST dhan murtaa'e CHIDIST dhanis murtaa'uu danda'a, kan dubbeen chaay iskuuweerii eddattoo tasaa keessatti akka deetaa dhedhii diisuun akka ulaagatti darbuu qabuu dha.
DeetaaBn waraantoo dow'annaawwaniiti.
DeetaaEn hangii gatiiwwan eeggamooti.
=CHITEST(A1:A6;B1:B6) walqixa 0.02 ti. Kun pirobaabilitii kan deetaa raabsii chaay iskuweerii tiyoorotikaalii gahuu dha.
Gatii faankishinii rukina carraa deebisa ykn faankishiniin tamsaasaa walittiqabaa tamsaasa chaay-iskuuweriif deebisa.
CHISQDIST(Lakkoofsa; Digiriiwwan Biliisummaa; Walittiqaba)
Lakkoofsa lakkoofsa faankishinichi herreegamuufi dha.
Digirii Biliisummaa digiriiwwan biliisummaa faankishinii chaay-iskuuweriiti.
Faallaa CHISQDIST deebisa.
Carraa gatii carraa faallaan tamsaasa chaay-iskuweerii herreegamuufii ti.
Tarree qajeelfamootaa keessa lakkoofsotni hammamii akka jiran lakkaa'a. Galchiiwwan barruu ni tuffatamu.
Galchiiwwan 2, 4, 6 fi saddeet kan dirreewwan gatii 1-4 keessaa ni lakkaawamu.
=COUNT(2;4;6;"eight") = 3. Kanaafuu lakkawwin lakkoofsaa 3 ta'a.
Tarree qajeelfamootaa keessa gatiiwwan hammamii akka jiran lakkaawa. Galchiiwwan barruutis ni lakkaawamu, diraa duwwaa dheerina 0 yoo qabaatan illee. Yoo qajeelfamni waraantoo ykn wabii ta'e, man'eewwan duuwwaa waraantoo keessaa ni tuffatamu.
=COUNTA(2;4;6;"eight") = 4. Kanaafuu lakkawwin gatiiwwani 4 ta'a.
Raabsii eksipooneenshiyaalii kenna.
EXPONDIST(Lakkofsa; Lambda; C)
Lakkofsi gatii fankishiniiti.
Lambdan gatii ullagaati.
Cn gatii yaayaa kan akkataa fankishinii murteessu dha.C = 0 rukkina fankishinii shallaga fi C = 1 raabsa shallaga..
=EXPONDIST(3;0.5;1) 0.78 kenna.
Gatiiwwan beekkamoo x fi y fayyamuudhan xuqaa sararri gatiiwwan y itti kiphu shallaga.
DeetaaYn tuuta hirkataa hubattoowwani ykn deetaati.
DeetaaXn tuuta of danda'aa hubattoowwani ykn deetaati.
Maqaawwan, waraantoowwan ykn wabiiwwan lakkoofsa qaban asitti fayyaduu qabu.
Walkipha shallaguuf, man'eewwan D3:D9 akka gatii y fi C3:C9 akka gatii x wardii fakkeenyaa irraa fayyadami.Naqaan akka armaan gadiiti:
Gatiiwwan kennaman irratti hundaa'uudhan iskuuweerii maxxantoo firooma pisan kenna. RSQ (akkasumas maxxantoo dutannoo jedhama) safara sirrummaa mijaa'inaa fi xiinxala rigireeshinii homishuuf fayyada.
DeetaaY waraantoo ykn hangii xuqaawwan deetaati.
DeetaaX waraantoo ykn hangii xuqaawwan deetaati.
=RSQ(A1:A20;B1:B20)Tuutota deetaa tarjaawwan A fi B keessaa lamanifuu maxxantoo firooma shallaga.
Title is: Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Tokko